ထေရဝါဒ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗုဒ္ဓဘာသာဌာနခွဲ၊ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကျောင်းဖြစ်သည်တမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ဗုဒ္ဓဘာသာဌာနခွဲ၊ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကျောင်းဖြစ်သည်
သီရိလင်္ကာဘုရင် ဒေဝနန္ပိယ တိဿ က ဘီစီ ၂၄၇-၂၀၇ တွင် တည်ထားခဲ့သော သုပန်ရမယ ပုထိုးတော်ကြီး
တိဘက်၊ မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံ၊ အရှေ့နှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိ အဓိကဗုဒ္ဓဘာသာသုံးခုကို ပြသသောမြေပုံ။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် အများဆုံးကိုးကွယ်ကြပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ နီပေါနှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် အနည်းအကျဉ်း ကိုးကွယ်ကြသည်။
၁ ထေရဝါဒနှင့် မဟာယာန ကွဲပြားချက်
၂ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်း (ဝါ) သီလ (၅) မျိုး
၃ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမူ (၅) ရပ်
၃.၂ စောင့်ထိန်းမူ သီလ ရှိရမည်
၃.၃ ကောတုဟလမင်္ဂလာကို မယုံကြည်ရ
၃.၄ ကံတရားကို ယုံကြည်သူဖြစ်ရမည်
၃.၅ သာသနာတော် အပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှု ကို မရှာမှီးရ
ထေရဝါဒနှင့် မဟာယာန ကွဲပြားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
(၁) နှစ်ဖက်လုံးက သကျမုနိ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာကို အမြင့်မြတ်ဆုံးသောမြတ်စွာဘုရား အဖြစ်လက်ခံကြသည်။
(၂) သစ္စာ လေးပါး တရားတော်ကို နှစ်ဖက်လုံးက အပြည့်အဝလက်ခံကြသည်။
(၃) မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းစဉ်သည် နှစ်ဖက်လုံး၏ တရားဖြစ်သည်။
(၄) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတော်သည် နှစ်ဖက်လုံးတွင် အတူတူပဲဖြစ်သည်။
(၅) ဖန်ဆင်းရှင်ကို နှစ်ဖက်လုံးတွင် လက်မခံကြပါ။
(၆) အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ နှင့် သီလ၊သမာဓိ၊ပညာတွေကို နှစ်ဖက်လုံးက လက်ခံကြသည်။
ထို့အတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ အဓိက တရားအနှစ်တွေသည် မကွဲပြားဘူးလို့ ဆိုရမည်။ အနတ္တ ကို နှစ်ဖက်လုံးတွင်လက်ခံသည်။ မဟာယနသည် အတ္တဝါဒ မဟုတ်ပါ။ အဓိက ကွဲပြားချက်က တရားတော်များ အပေါ်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဗောဓိသတ္တ လို့ ခေါ်တဲ့ ဘုရားလောင်း၊ ဘုရားကျင့်စဉ် ကျင့်သူအပေါ်မှာ ထားသည့် သဘောထား ဖြစ်သည်။။ ထေရဝါဒ က ဘုရားလောင်း ကို ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးလို့ မကိုးကွယ်ကြပါ။ ထေရဝါဒဆိုတာ ရဟန္တာ ဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုဖို့ ကျင့်တဲ့ ဝါဒဖြစ်ပြီး၊ မဟာယာနကတော့ ဗုဒ္ဓဖြစ်မယ့် ဘုရားလောင်း ဗောဓိသတ္တကျင့်စဉ်ကို လက်ခံတဲ့ ဝါဒလို့ ဆိုကြပြန်သည်။ ထေရဝါဒ တွင် ဗောဓိသတ္တ သည် လွတ်မြောက်ရာ လမ်းကို သစ္စာတရားကို မသိသေးတဲ့ ပုထုဇဉ်မို့ မကိုးကွယ်ကြပါ။ မဟာယာန တွင် ကိုးကွယ်စရာ ဗောဓိသတ္တ တွေ များပါသည်။ ဘုရားလောင်း၊ ဘုရား၏ မိခင်၊ ဖခင်အစုံ ဖြစ်သည်။ မဟာယာန မှာ အရဟတ္တဖိုလ်ရပြီးသား ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် အရဟတ္တဖိုလ်ကနေ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုလို့ မရသေးပါ။ အရဟတ္တဖိုလ်ကနေ အနာဂမ်၊ သကဒါဂမ်၊ သောတာပန် အထိ ပြန် လျှောကျသွားပြီး ပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားရသည် ။ ပြီးမှ ဘုရားဆုပန်ပြီး ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပြန်ကြိုးစားကြရသည်။ ထေရဝါဒနှင့် မဟာယာန အယူအဆ လွဲနေသည်။ မူရင်းဝိနည်း+ သုတ္တန် + အဘိဓမ္မာများအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပြီး နဲနဲမှ မပြင်တာက ထေရ ဝါဒ ဖြစ်သည်။ မူရင်းမှ ပြင်သည်က မဟာယာန ဝါဒ ဖြစ်သည်။ ထေရ ဝါဒ က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားချမှတ်ခဲ့သော မူရင်း ဝိနည်း+ သုတ္တန် + အဘိဓမ္မာများ၊ သိက္ခာပုဒ်များ တရားတော်များကို နဲနဲမှ မပြင်ကြပါ။ 
မဟာယာနနှင့် ထေရဝါဒ ဟူ၍ဂိုဏ်းကြီး နှစ်ခုကွဲသကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆမှာလည်း ကွဲပြားသည်။ မဟာယာန ကျမ်းများတွင် နိဗ္ဗာန်ကို သုခချမ်းသာတို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည့် ဘုံဗိမ္မာန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သံသရာကိုယ်၌ကပင် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း ကွဲပြားသော အယူအဆများ၊သဘောတရားများကို တင်ပြထားသည်။ သို့သော် ထေရဝါဒတွင်မူ ဆရာစဉ်ဆက် နှင့် ကျမ်းဂန်များတွင် နိဗ္ဗာန်သည် တည်နေရာဘုံအဖြစ် မယူဆ၊ မသတ်မှတ်သင့်ကြောင်း၊ သံသရာနှင့် ဆက်စပ်မှုကင်းမှ သာလျှင် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် တိကျစွာရှင်းလင်းပြဆိုထားပေသည်။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်အရ ၃၁ ဘုံ၌ ရှိကြသော သတ္တဝါတို့သည် သံသရာလည်ကြရာတွင် ၃၁-ဘုံမှ စိတ်၏ လုံးဝ ချမ်းသာရာဖြစ်သော ကိလေသာများမှ လွတ်ကင်းရာကို နိဗ္ဗာန်ဟု ခေါ်သည်။ နိဗ္ဗာန်တွင် လူတို့၏ ဒုက္ခအားလုံးမှ ကျွတ်ငြှိမ်းပြီး နိဗ္ဗာန် သို့ရောက်ရှိပြီးနောက် သံသရာ အသစ်တဖန်ပြန်လယ်ခြင်း မရှိတော့ပေ။ ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊ အာဟာရ တို့၏ ပြုပြင်စီရင် ခြင်းမှ လွတ်သော တရား၊ အလုံးစုံငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မရှိသော အေးငြိမ်းချမ်းသာမှု၊ တဏှာမရှိခြင်း၊ တဏှာမှ ကင်းလွတ်ခြင်း၊ ဒုက္ခမှ အပြီးတိုင်လွတ်မြောက်ခြင်း၊ မွေး၊အို၊နာ၊သေ မရှိခြင်း၊ စွန့်လွတ်ခြင်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ မကပ်ငြိခြင်း၊ ဘဝ မရှိခြင်း၊ ပူဆွေးမှု မရှိခြင်း၊ ငိုကြွေးမှုမရှိခြင်း၊သောက မရှိခြင်း၊ အညစ်အကြေး ကိလေသာ မရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန် ဆိုသည် မှာ အသင်္ခတ ဓမ္မအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ရှိကြောင်း နှင့် နိဗ္ဗာန်ကို ရရှိရန် ပြည့်စုံသိရှိနားလည်ရန် သတိပဌာန်လေးပါးသည်သာ တစ်ကြောင်းတည်းသော လမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ကို သတိပြုမိရင် ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ဂုဏ်ပုဒ်များနှင့် ကြည်ညိုလို့ ရသည်။ ဖော်ပြပါ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ တို့သည် သူ့နည်း သူ့ဟန်နှင့်သူ လူသားများအတွက် အကျိုးရှိသော ဆုံးမဩဝါဒများ ပါရှိကြသည်။
လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်း (ဝါ) သီလ (၅) မျိုး[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး အတွက် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် စည်းကမ်း (ဝါ) သီလ (၅) မျိုး ရှိသည်။
သက်ရှိလူသား တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကို ခိုးယူလုယက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
ကာမဂုဏ် ဖေါက်ပြန်မှု အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်း ရောင်းဝယ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရခြင်း။
စည်းကမ်း(၅) မျိုးကို ကြည့်လျှင် မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လူသားတို့၏ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ချမ်းသာလုံခြုံရန်၊ အိမ်ထောင်ရေး သာယာရန်၊ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သစ္စာတရားထွန်းကားရန်၊ လူသားတို့၏ ဉာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း မှီရန် အရေးကို မျှော်တွေးကာ အထက်ပါစည်းကမ်း ၅ ချက်ကို ကျူးလွန်လျှင် ဖြစ်​ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များကို​ ဟော​ဖော်ညွှန်ပြ၍ ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရန် ဆိုဆုံးမခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် အပျော်ကြူးခြင်း အလိုရမက်ကြီးခြင်း ကြောက်စိတ်များခြင်း တို့ကြောင့် မိမိတို့ဘဝ အတွက် အားကိုးရာတွေကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်တတ်ကြသည်။ စိတ္တဇ အတွေးတွေကို ပုံဖော်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်လက်ခံနေသည်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓက နှစ်သက်တော်မမူပေ။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်လျှင် အထင်စွဲအာရုံ ကိုးကွယ်မှုမျိုးစုံကို စွန့်လွှတ်ရမည်၊ အတွေးစွဲအလီလီ ယုံကြည်မှုအရပ်ရပ်ကိုလည်း ပယ်စွန့်ကြရမည်။
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမူ (၅) ရပ်[ပြင်ဆင်ရန်]
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ဖြစ်ရေးအတွက် ဥပဒေသ မူကြီး (၅) ရပ်ကို စံပြု သတ်မှတ် ထားခဲ့သည်။
ကောတုဟလ မင်္ဂလာကို မယုံကြည်ရ။
သာသနာတော်ပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှုကို မရှာမှီးရ -
ဆိုသော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် မူကြီး (၅) ရပ်ကို အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် မှာ ချပြတော်မူခဲ့သည်။
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါး တို့၌ ဘုရားစစ်၊ ဘုရားမှန်၊ တရားစစ်၊ တရားမှန်၊ သံဃာစစ်၊ သံဃာမှန်၊ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ စိတ်ရှိရမယ်လို့ ဆိုလိုသည်။
စောင့်ထိန်းမူ သီလ ရှိရမည်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝါရိတ္တ သီလ လို့ခေါ်တဲ့ ငါးပါး သီလ၊ ရှစ်ပါး သီလ နဲ့ စာရိတ္တ သီလလို့ ခေါ်တဲ့ လင်ကျင့်ဝတ်၊ မယားကျင့်ဝတ်၊ ဆရာ့ကျင့်ဝတ်၊ တပည့်ကျင့်ဝတ်၊ မိဘ ကျင့်ဝတ်၊ သားသ္မီး ကျင့်ဝတ်၊ အထက်လူကြီးကျင့်ဝတ်၊ အောက်လက်ငယ်သား ကျင့်ဝတ်- စသည့် ကျင့်ဝတ်သီလ များနှင့် ပြည်စုံရမည်။
အချို့သောလူများသည် “အိမ်မြောင်စုတ်ထိုးရင်… လာဘ်ကောင်းတယ်” “ ကျီးကန်းလာနားရင်…နိမိတ်မကောင်းဘူး” ဆိုတဲ့ ကောတုဟလမင်္ဂလာကို ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင် ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါး၊ ကျီးကန်းလာခြင်း၊ အိမ်မြောင်စုတ်ထိုးခြင်း၊ နေကြတ်၊ လကြတ်- စသည် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး ရှိသည်များကို လက်မခံရန်။
အကြင်မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုး၏ ထိုအပင်ကို သာလျှင် ရိတ်သိမ်းရ၏- ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော် အတိုင်း ကောင်းကံလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးခံစားရ မကောင်းကံလုပ်ရင် မကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို ယုံကြည်လက်ခံကြရမယ်လို့ဆိုလိုသည်။
သာသနာတော် အပြင်ပ၌ ကိုးကွယ်မှု ကို မရှာမှီးရ[ပြင်ဆင်ရန်]
လူများဟာ အပျော်ကြူးခြင်း၊ အလိုကြီးခြင်း၊ ကြောက်စိတ်များခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း တွေကြောင့် သာသနာတော်၏ ပြင်ပဖြစ်သော နတ်ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ဘိုးတော်/မယ်တော် ကိုးကွယ်ခြင်း၊ အင်း/အိုင်၊ လက်ဖွဲ့၊ ဗေဒင်၊ မန္တာန် ကို အားထား ယုံကြည်ခြင်း စသော သာသနာတော်ပြင်ပ ကိုးကွယ်ရာများကို မရှာမှီးရပါ။
↑ Theravada - Mahayana Buddhism
တရုတ်ပြည် သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံ
ဗုဒ္ဓ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်း Archived2June 2013 at the Wayback Machine.
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေ အများဆုံးတရုတ်ပြည် Archived 16 January 2016 at the Wayback Machine.
အမြင့်မြတ်ဆုံးသော မြတ်စွာဘုရား Archived7August 2013 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထေရဝါဒ&oldid=706461" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။